Sidee Donlad Trump Ugu Guuleystay Doorashooyinkii Madaxtinimada Mareykanka Maxaase laga Fili Karaa? Warbixin
Wednesday November 09, 2016 - 17:38:27 in Wararka by Super Admin
Donlad Trump ayaa noqonaya Hogaamiyaha cusub ee dalka Mareykanka, kadib markii uu si weyn kaga adkaaday haweeneydii la tar tarmeysay ee Hillary Clinton.
Donlad Trump oo ah cunsuri ayaa noqday madaxweynaha 45-aad eeUSA
Musharaxa u tar taramaya Xisbiga Jamhuuriga ee dalka Mareykanka ee Donlad Trump ayaa ka guuleystay haweeneyda ka socotay Xisbiga dimuqraadiga ee Hillary Clinton, kadib cod bixintii doorashooyinka madaxtinimada ee maalintii shalay ka dhacay dalkaasi.
Natiijada horudhaca ah ee illaa iyo hadda la shaaciyay ayaa muujineysa in Musharaxa u tartamaya xisbiga Jamhuuriga ee Donlad Trump inuu si weyn kaga guuleystay haweeneyda u tar tarmeysa Xisbiga dimuqraadiga ee Cilinton.
Donald Trump ayaa helay 270-ka Codadka loo yaqaan Electoral Colleges ee ah ergada u codeysa madaxweynaha, halka Clinton ay heshay 215 Cod. Hillaray Clinton ayaa ku guuleystay 18 gobol oo ay ka mid yihiin gobollada aadka muhiimka ah ee Virginia iyo Clorado, waxay sidoo kale ku guuleytay codadkii laga dhiibtay magaalada Washintong.
Arrinta la yaabka leh ayaa noqotay in Trump uu ku guuleystay gobollo aan ku dhawaad muddo 30 sano ah looga codeyn Xisbiga Jamhuuriga, sida gobolllada Penselvania iyo Wiskosin, waxaana arrintaasi dhakafaar ku noqotay dadka Mucaaradka ku ah Donlad Trump.
Donlad Turmp wuxuu sidoo kale ku guuleystay 25 gobol oo ay ka mid yihiin labada gobol ee muhiimka ah kala ah Florida iyo Ohio, isagoona guulo ballaaran kaso hooyay gobollada kuyaalla Koonfurta dhexe ee dalka Mareykanka, halkaas oo ay ku badan yihiin taageerayaashiisa.
Labada Musharax ayaa waxay natiijooyin wax ku ool ah kasoo xaqiijiyeen gobollo markii hore lasii saadaalinayay inay kasoo hoyn karaan natiijooyin waaweyn, iyadoo Donald Trump oo codadka ugu badan ka helay gobollada dhaca Koonfurta iyo galbeedka dhexe ee dalka Mareykanka, halka Cilinton ay guulo kasoo hoysay qaar ka tirsan gobollada dhaca Xeebta bari ee dalka Mareykanka.
Donalad Trump wuxuu sidoo kale guulo waaweyn kasoo hooyay Codadka laga dhiibtay gobollada kala ah Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi, Oklahama, iyo Texas, iyadoo haweeneyda la loolameysa ay ku horreyso gobollada kala ah Illinois, Maryland, Vermont, iyo New Jersi.
Taageeraasha Trump ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha waaweyn ee kuyaalla gobollada kala duwan ee dalka Mareykanka iyagoo lulayay Sawirada iyo astaamaha Xisbiga Jamhuuriga, waxaana la filayaa in Donlad Trump uu taageerayaashiisa kula hadlo magaalada Newyork, kadib markii si rasmi ah loogu dhawaaqo natiijada kama dambeysta ah ee doorashada.
Donlad Trump ayaa noqonaya madaxweynaha 45aad ee hogaamin doona Aqalka cad ee looga arrimiyo ee dalka Mareykanka, iyadoo guusha uu kasoo hooyay doorashooyinka ay dad badan lama filaan ku noqotay, xilli lasii saadaalinayay in Cilinton ay ku horreyso Codadkii la dhiibtay.
Madaxweynaha cusub ee Mareykanka waxa uu dhashay bishii June ee sannadkii 1946-dii, waana 70 jir ah maal qabaneen ah, oo aan horey siyaasadda usoo marin, wuxuu caan ku yahay naceybka Muslimiinta iyo dadka soo galootiga ee ku nool dalka Mareykanka, wuxuuna horey ugu hadlay hadallo buuq badan dhaliyay, kuwaas oo ay ka mid yihiin in hadduu ku guuleysto Aqalka cad inuu Muslimiinta ka celinayo inay yimaadaan dalka Mareykanka, wuxuu sidoo kale sheegay inuu dar dar gelin doono la dagaalanka waxa ay reer galbeedku ugu yeeraan Argagixisada.
Xisbiga Jamhuuriga ee Donald Trump uu ka tirsan yahay, islamarkaana hadda ku guuleystay hoggaanka dalka Mareykanka ayaa sannadkii 2001-kii ku dhawaaqday duullaan Saliibi ah oo ka dhan ah dadka Muslimiinta, waxaana Mareykanku ay xilligaas dagaal ku qaadeen dalalka Afghanistan iyo Ciraaq, iyadoo la saadaalinayo in Donlad Trump uu Mareykanka lugaha u geli doono dagaallo kale oo hor leh oo mustaqbalka sababi doona bur bur dhaqaale iyo mid meliteri oo lasoo derisa dalkaasi.